Tian'Andriamanitra ianao (Dieu vous aime)
Na inona na inona endrika mahafinaritra atafintsika ny maha-olombelona antsika, dia tsy milaza amintsika mihitsy ny Baiboly hoe mendrika hotiavina isika, na afaka hiova ho maha te ho tia. Ambaran’ny Baiboly fa raha eo imason’Andriamanitra, dia “sady hala no mpankahala” isika (Titosy 3:3). Mitady fitiavana isika, nefa tsy maha-te ho tia; koa izany no mahatonga korontana mandrakariva eo amin’ny fo sy ny saina.
“Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha” (1 Jaona 4:19).
“Fa Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy… Fa … fony mbola fahavalo …isika no nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny nahafatesan’ny Zanany” (Romana 5:8,10).
“Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria Izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika” (1 Jaona 3:16).
“Andriamanitra dia fitiavana” : indroa no nilazan’i Jaona izany ao amin’ny epistily voalohany nosoratany (1 Jaona 4:8,16).
“Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jaona 3:16).
“Izao no nanehoana ny fitiavan’Andriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny Zanany Lahitokana tamin’izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin’ny alàlany. Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an’Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra noho ny fahotantsika” (1 Jaona 4:9-10).
Eny, tian’Andriamanitra tokoa ny olombelona. Manantitrantitra izany Izy, ary mampiseho miharihary ny porofom-pitiavany...kanefa, indraindray mahazo valinteny am-piavonavonana hoe: “Inona no nentinao nitia anay?”(Malakia 1:2).
“Endrey! Manao ahoana ny fitiavana nasehon’ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra!”(1 Jaona 3:1).
Nefa tokony hangetaheta ianao, hangetaheta izany fitiavan’Andriamanitra izany, ka hamaly ny antson’ny Tompo Jesoa hoe: “Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro” (Jaona 7:37).
“Izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony” (Jaona 6:35).